Inkonzo kunye nokuKhuphela
Umatshini wemaski osicaba
Umatshini wokwenza imaski N95
Umatshini wokusika imaski
Mask edge umatshini banding
Cup imaski machine
Thetha noHaoJing+86 18652005139
Yintoni endifanele ndinikele ingqalelo kuyo xa ndijonga umatshini wemaski?
Iimpawu eziphambili zomatshini wemaski zezi: ukusetyenziswa kwenkqubo yokulawula ukusika, ukusetyenziswa kwamaqhosha alula, ukusetyenziswa komntu ngenjongo. Inokwenza i-1 ukuya kwi-4 imigangatho yeemaski ezisemgangathweni ngexesha kunye nesantya sokubumba ngokukhawuleza; iteknoloji yendalo yonke isombulula isithethe...
Umatshini wemaski wekomityi ozenzekelayo
1.Intshayelelo yomatshini wokwenza imaski emile okwekomityi Umatshini wemaski kukwenza iindidi ngeendidi zeemaski ngokusebenza okuthile kokucoca ngokucinezela okushushu, ukuwelda nge-ultrasonic kunye nokususwa kwenkunkuma. Umatshini wemaski ayingomatshini omnye, udinga oomatshini abaninzi ukuze ...
Umatshini wemaski ozenzekelayo kunye nentshayelelo yokuvelisa imaski!
Ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhani omtsha wenyumoniya, kuye kwakho ukunqongophala kweemaski kwilizwe lonke nakwihlabathi liphela, kwaye "ukungakwazi ukuthenga iimaski" kuye kwaba ngumba oshushu. Imaski encinci inganqanda njani intsholongwane eyoyikekayo? Namhlanje, siza kulungisa imveliso yemaski eq...
Indlela yokunciphisa izinga lokungaphumeleli komatshini wemaski ozenzekelayo?
Umatshini wokuphefumla ozenzekelayo we-Ultrasonic luhlobo lwenkqubo yokulawula umatshini ophambili, izixhobo zokulawula inkqubo ye-PLC ukuya kumatshini ngexesha elinye eligqityiweyo, kwinkqubo yokuvelisa iyonke, kufuneka kuphela ukugqiba ukusebenza, ukondla oku kokohlobo lwe-automat...
Ngaba iimaski zinokususwa ngo-2021?
Sonke siyazi ukuba ngexesha lobhubhani, iimaski ziyinto eyimfuneko yokukhusela wonke umntu, kunye nobhubhani ophindaphindiweyo wenza abantu bazive ngathi ubhubhane kuya kuba nzima ukuphelisa ngo-2021. Ke, unokukhulula imaski yakho ngo-2022, kwaye uyafuna ukugcina iimaski ze-Spri...
Umatshini wemaski ozenzekelayo ulwazi oluqhelekileyo lokugcinwa
Umatshini wokumaski, njengoko negama lisitsho, sisixhobo sokwenza iimaski. Ngoku kukho oomatshini bemaski emarikeni: umatshini wemaski osicaba, umatshini wemaski wekomityi, umatshini wemaski womlomo wedada, umatshini wokugoqa imaski, umatshini wemaski ozenzekelayo njalo njalo. Abo bathenge i-automatic flat m...
Intshayelelo kuhlelo olulula lomatshini wemaski ozenzekelayo
ngu admin on 21-10-22
Zininzi iintlobo zoomatshini bemaski abazenzekelayo, ngokwemveliso yeemaski ezohlukeneyo zohlulwe ikakhulu kumatshini wemaski ozenzekelayo, indlebe yangaphakathi ezenzekelayo enomatshini wemaski, umatshini wemaski ozenzekelayo wekomityi, umatshini wemaski ozenzekelayo we-duckbill, imaski ezenzekelayo...
Ucocwa njani umatshini wemaski wentlanzi ozenzekelayo?
Ucocwa njani umatshini wemaski wentlanzi ozenzekelayo? Le yingxaki ekuhlangabezene nayo ngabavelisi bemaski abaninzi abathenge umatshini wemaski ozenzekelayo wentlanzi, abasebenzi abaninzi abasebenzisa umatshini abayazi itekhnoloji kwaye abayazi indlela yokulungisa izixhobo. Ngoko, ungenza njani...
Ugunyaziso lwesiqhelo lomatshini wokudibanisa imaski olahlwayo
ngu admin nge 21-09-30
Umatshini we-welding we-ear band we-ear eangaphakathi owenziweyo we-ear band uquka umatshini we-welding we-ear band kunye nokuhambisa, onemisebenzi ye-welding engaphakathi ye-ear band, i-hem welding, i-hem cut kunye ne-mask yemveliso yeemaski, ukuqonda ukuveliswa okuzenzekelayo kwe-wel engaphakathi yendlebe. ...
Umatshini wemaski we-N95 ukusilela okuqhelekileyo kunye nezisombululo
Umatshini wemaski we-N95 ozenzekelayo ngumgca wokuvelisa imaski entsha kwaye entsonkothileyo, sihlala sidibana neengxaki kwinkqubo yokuyisebenzisa, okokuqala, kufuneka siqonde ngokucacileyo ukuba zeziphi iimpazamo eziya kwenzeka kumatshini wemaski we-N95, ezi mpazamo zinokusonjululwa ngokukhawuleza. a...
Kutheni le nto umatshini wemaski ecaba uyimodeli yokuthengisa eshushu kwisixhobo semaski?
Kucacile kwimveliso yemaski kunye nabavelisi bokulungisa ukuba umatshini wemaski osicaba ngumatshini ozenzekela ngokupheleleyo wokuvelisa iimaski ezisicaba. Inokuthi izenzekele ngokupheleleyo ukusuka kwimveliso yomzimba ophambili wemaski ukuya kwiwelding yomtya wendlebe, ucingo lwempumlo kunye ...
Inkqubo yokuvelisa iimaski ezilahlwayo ngabavelisi beFlat mask imaski
ngu admin ngo 21-09-02
Ukusukela kubhubhani we-coronavirus, kuye kwakho ukunqongophala kwezixhobo zemaski kwilizwe liphela nakwihlabathi. Ukungakwazi ukuthenga iimaski kwaba ngumbandela oshushu ngelo xesha. Kwixesha elidlulileyo, iimaski yayingeyomfuneko kubomi bemihla ngemihla yomntu wonke, kodwa ngoku iimaski ziye zaba yinto yorhwebo ...
Idilesi: 99 Shangyu Road, Xinbang Town, Songjiang District, Shanghai
BHALISA UZE UFUMANE IINDABA ZAmva nje KUNYE NEZINIKEZELO